PUBG Mobile ဆော့ပြမယ့် Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင်များ – Gaming Noodle
ကေပေါ့ပ်လို့ ပြောလိုက်ရင် လူတော်တော်များများရဲ့စိတ်ထဲရောက်လာမယ့်အထဲမှာ Veteran အဖွဲ့တစ်ခု လို့ဆိုနိုင်ပြီး အခုထိလူကြိုက်များနေဆဲ Girls’ Generation လည်းပါဝင်မှာပါ။ GG အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Sunny နဲ့ Taeyeon တို့ဟာ သူတို့ရဲ့အရည်အချင်းတွေထဲက Gaming စွမ်းရည်ကို ပြသဖို့အတွက် လာမယ့် S.M. Super League ရဲ့ PUBG Mobile ပွဲစဉ်မှာ ဝင်ရောက်ဆော့ကစားပြမယ်လို့ သိရပါတယ်။
S.M Super League ဆိုတာကတော့ GG ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ S.M. Entertainment မှ စပွန်ဆာပေးထားတဲ့ Esports League တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်းမှာ လူကြိုက်များတဲ့ League of Legends ဂိမ်းနဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ စတင်ကျင်းပခဲ့တာ အခုဆိုရင် စတုတ္ထမြောက် Season ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကို လူကြိုက်များလာတဲ့ PUBG Mobile ဂိမ်းကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ S.M. Super League ထဲသို့ ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး EXO အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Baekhyun မှ ပါဝင်ဆော့ကစားပြခဲ့ပါတယ်။ Baekhyun ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ပထမဆုံး Super League Season 1 မှာလည်း Super Juniors အဖွဲ့ဝင် Heechul နဲ့အတူ LoL ဝင်ဆော့ပြခဲ့သေးသူပါ။ (ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ ကျွန်တော် သိပ်မကြည့်ဖူးပါဘူး)
Sunny နဲ့ Taeyeon တို့ရဲ့ PUBG Mobile ကစားနေပုံကိုတော့ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှာ Huya Streaming ပလက်ဖောင်းပေါ်ကနေ ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ ဒါဟာ အခုတလော နိုင်ငံတကာကိုပါ ပစ်မှတ်ထားလာတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ Huya ရဲ့သွက်လက်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေထဲက တစ်ခုလို့ပဲ ဆိုရမှာပါပဲ။
ကပေေါ့ပျလို့ ပွောလိုကျရငျ လူတျောတျောမြားမြားရဲ့စိတျထဲရောကျလာမယျ့အထဲမှာ Veteran အဖှဲ့တဈခု လို့ဆိုနိုငျပွီး အခုထိလူကွိုကျမြားနဆေဲ Girls’ Generation လညျးပါဝငျမှာပါ။ GG အဖှဲ့ဝငျတှဖွေဈတဲ့ Sunny နဲ့ Taeyeon တို့ဟာ သူတို့ရဲ့အရညျအခငျြးတှထေဲက Gaming စှမျးရညျကို ပွသဖို့အတှကျ လာမယျ့ S.M. Super League ရဲ့ PUBG Mobile ပှဲစဉျမှာ ဝငျရောကျဆော့ကစားပွမယျလို့ သိရပါတယျ။
S.M Super League ဆိုတာကတော့ GG ရဲ့မိခငျကုမ်ပဏီဖွဈတဲ့ S.M. Entertainment မှ စပှနျဆာပေးထားတဲ့ Esports League တဈခုဖွဈပွီး ကိုရီးယားနိုငျငံတှငျးမှာ လူကွိုကျမြားတဲ့ League of Legends ဂိမျးနဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ စတငျကငျြးပခဲ့တာ အခုဆိုရငျ စတုတ်ထမွောကျ Season ကိုရောကျလာခဲ့ပါပွီ။
တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ကို လူကွိုကျမြားလာတဲ့ PUBG Mobile ဂိမျးကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈမှာ S.M. Super League ထဲသို့ ထညျ့သှငျးခဲ့ပွီး EXO အဖှဲ့ဝငျတဈဦးဖွဈတဲ့ Baekhyun မှ ပါဝငျဆော့ကစားပွခဲ့ပါတယျ။ Baekhyun ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှဈက ပထမဆုံး Super League Season 1 မှာလညျး Super Juniors အဖှဲ့ဝငျ Heechul နဲ့အတူ LoL ဝငျဆော့ပွခဲ့သေးသူပါ။ (ဒီအစီအစဉျကိုတော့ ကြှနျတျော သိပျမကွညျ့ဖူးပါဘူး)
Sunny နဲ့ Taeyeon တို့ရဲ့ PUBG Mobile ကစားနပေုံကိုတော့ ဇူလိုငျလ ၁ ရကျနမှေ့ာ Huya Streaming ပလကျဖောငျးပျေါကနေ ထုတျလှငျ့သှားမှာပါ။ ဒါဟာ အခုတလော နိုငျငံတကာကိုပါ ပဈမှတျထားလာတယျလို့ ယူဆရတဲ့ Huya ရဲ့သှကျလကျတဲ့ ခွလှေမျးတှထေဲက တဈခုလို့ပဲ ဆိုရမှာပါပဲ။